Sawirro+Codad: 53 kamid ah odayaashii xildhibaannada soo xulay oo Sh/Hoose lagusoo bandhigay.
Sunday September 22, 2019 - 12:16:11 in Wararka by
Deegaanka Kuunya Barrooe ee Shabeelaha hoose ayaa lagusoo bandhigtay 53 ruux oo kamid ah ergadii soo xulay xildhibaanada Baarlamanka Dowladda Federaalka kuwoodii kasoo galay Koonfur galbeed iyo Hirshabeelle.
Munaasabaddii lagusoo bandhigayay Ergadii soo xulay xildhibaannada waxaa ka qeyb galay mas'uuliyiin iyo culimaa'udiin waxaana kamid ahaa Sheekh Fu'aad Max'med Khalaf iyo Sheekh Abuu Usaama waaliga Sh/hoose.
Sheekh Fu'aad ayaa Odayaashii dhaqanka ee goobta ku sugnaa ugu baaqay in ay ka qeyb galaan halganka Jihaadiga ah ee ka socda dalka Soomaaliya.
Halkan ka degso Khudbadihii laga jeediyay munaasabadda ama hoos ka Daawo
Askari American ah oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay gobolka Sh/hoose.
Sarkaal lagu dhaawacay Baydhabo iyo qaraxyo ka dhacay Daarusalaam Sh/hoose.
8 askari oo ku dhintay weeraro ka dhacay degmada Afgooye ee Sh/hoose.